Bixinta Warshadda Tayada Sare Wakiilka kululaynta daryeelka maalinlaha ah Vanillyl Butyl Ether (VBE) CAS NO 82654-98-6 Soo-saaraha iyo Bixiyaha | Zhuoer
Wakiilka kululaynta daryeelka maalinlaha ah ee Warshadda Vanillyl Butyl Ether (VBE) CAS NO 82654-98-6
Wakiilka kuleylka Vanillyl Butyl Ether (VBE)
Vanillyl Butyl Ether (VBE) waa ether of monohydroxybenzoic acid. Waxaa lagu daraa badeecooyinka cuntada sida wakiilka dhadhanka. Waxa kale oo ay ku jirtaa waxyaalaha la isku qurxiyo iyo alaabooyinka daryeelka shakhsi ahaaneed oo ah maaddooyinka udugga, wakiilka daryeelka afka, wakiilka qaboojiyaha timaha, iyo wakiilka kululaynta ama qaboojinta.
Barta karkarinta 241 ° C (iftiin)
cufnaanta 1.057 g/mL 25 ° C (iftiin.)
tusaha dib -u -celinta n20/D 1.516 (iftiin.)
Alaabta Tijaabada Faahfaahinta
Muuqaal Dareere huruud ah oo aan midab lahayn
Ur Vanilla oo daciif ah iyo caraf udgoon.
Tusaha wax lagu qoro @20 ℃ 1.5110-1.5210
Cufnaanta Qaraabada 1.0480-1.0680
Hydroquinone P 5 ppm
Bir culus Pp 10ppm
Sida Pp 3ppm
Nuxurka GC ≥98.0%
Vanillyl butyl ether waa ether of monohydroxybenzoic acid. Waxaa lagu daraa badeecooyinka cuntada sida wakiilka dhadhanka. Waxa kale oo ay ku jirtaa waxyaalaha la isku qurxiyo iyo waxyaabaha daryeelka shakhsi ahaaneed. Waxay leedahay dabeecad trigeminal, gubasho, dabeecad basbaas kulul waxaana loo isticmaali karaa dhadhanka udgoon sida basbaas, qorfe iyo sinjibiil, iyo sidoo kale isku darka qaar ka mid ah codsiyada la dubay, oo ay ku jiraan buskudyada.
Waxay leedahay codsiyo kale oo kale oo ay ka mid yihiin dhadhaminta cabbitaannada aalkolada iyo kuwa aan khamriga ahayn oo leh geedo, berry, vanilj, kola, aleer sinjibiil, biirka xididka, shukulaatada kulul, chai, shaaha barafka iyo miinooyinka.
Waxa kale oo loo isticmaali karaa sidii wakiil diirran.
Sideen u qaataa wakiilka kuleylka Vanillyl Butyl Ether (VBE) CAS NO 82654-98-6?
Hore: Sahayda warshadda 6-Hexanalactone/6-Caprolactone oo leh qiimo wanaagsan CAS 502-44-3
Xiga: Sahayda warshadda 99% 5,5-dimethylhydantoin/DMH CAS 77-71-4 oo leh qiimaha ugu fiican
Sahayda Factory daahir sare CAS ALPHA-TERPINENE ...